घर सर्च गर्न पुगेको सेना र अज्ञात समुहबिच गोली हानाहान, १४ जनाको मृत्यु — Sanchar Kendra
१महाकाली नदीमा बाढी- निर्माणाधीन पुलको बाँध बगायो, ८ घर डुबानमा
२बेहुली लिन गएका बेहुलालाई कोरोना देखिएपछि…
४प्रेमिकासँग ​पुनर्मिलनपछि दंग ज्याकले किन गर्न सकेनन् गोल ?
५आँपका लागि राखियो तीन सुरक्षाकर्मी, ९ वटा कुकुरले दिन्छन् चौबिसै घण्टा पहरेदारी
६बुढानिलकण्ठमा केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गर्दै देउवा
७नबिल बैंक लिमिटेडको विशेष साधारण सभा सम्पन्न
८बाबुराम भट्टराईको यस्तो एक ट्वीटले सामाजिक सञ्जालमा खैलाबैला, कसलाई के भने त्यस्तो ?
९असार ९ गतेदेखि दुबई-काठमाडौँ उडान सुरु हुँदै, कति छ टिकट मूल्य ?
१०थुनिएको तामाकोशी नदीलाई चिनले यसरी खोलिदिए, के भन्छन दोलखाका डिएसपी ?
११कहिलेदेखि सुरु हुँदैछ ‘स्मार्ट लकडाउन’ ? अब यी क्षेत्रहरु खोल्न दिइने
१२जिरा खानुहोस् मोटोपना घटाउनुहोस्, दुई हप्तामा घट्छ ५ केजी वजन
४आजदेखि थपिएको निषेधाज्ञामा के गर्न पाइन्छ, के पाइदैन ? हेर्नुहोस बिस्तृतमा
५नेपाललाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने अमेरिकाकाे घोषणा
६कोरोना बिरुद्ध ललितपुरमा नेकपाको जनसहयोग एवं हातेमालो अभियान सुरु
७सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरेको खण्डमा एमालेले स्वीकार्छ- नेता बोगटी
८काठमाडौँ उपत्यकामा लागु भयो अहिलेसम्मकै यस्तो कडा नियम, जारी भयो सूचना
९जेलबाट छुटेपछि माइला लामासहितका नेताहरुको विप्लवसँग पहिलो भेट, के-के भयो कुराकानी ?
१०नेकपा नेतृ आस्थालाई मातृ शोक, विप्लवद्वारा श्रद्धाञ्जली व्यक्त
११कोरोना प्रभावितलाई जनगणतान्त्रिक सम्पर्क मञ्चको सहयोग, रेडियो मिर्मिरेद्वारा समन्वय
१२आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट सुरक्षित राख्ने ५ तरिका
घर सर्च गर्न पुगेको सेना र अज्ञात समुहबिच गोली हानाहान, १४ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । पछिल्लो समय देश भित्र तथा बाहिर दुर्घटना, बिस्फोट तथा गोली हानाहान जस्ता समाचार बाहिर आइरहेका छन। यस्ता यस्तै भयानक समाचारहरु सुन्न आइरहेको बेला फेरी एउटा सुरक्षाफौज तथा घरमा लुकेर बसेका अज्ञात समुहबिच डरलाग्दो भिडन्त भएको छ।
इजिप्टको सिनाईमा सरकारी फौजमाथिको आक्रमणमा संलग्न रहेको शंकास्पद १४ जना आतङ्ककारी मारिएको त्यहाँको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा आरिश शहरमा आक्रमण गरी भागेका आतङ्ककारी नै मारिएको उल्लेख छ । उनीहरु अल–मासाइद जिल्लास्थित एक खाली घरमा लुकेर बसेको अवस्थामा भेटिएको सुरक्षा फौजले जनाएको छ ।
उक्त घर खानतलासी गर्ने क्रममा सुरक्षाफौज र आतङ्ककारीबीच गोली हानाहान भएको थियो । सैनिक प्रवक्ताले घटनास्थलबाट ठूलो परिमाणमा गोलीगठ्ठा, मेसिनगन र विस्फोटक पदार्थ भेटिएको दाबी गरेको छ ।
बुधबार बिहान उत्तरी सिनाईको आरिश नगरको एक सुरक्षा जाँच पोष्टमा आतङ्ककारीले गरेको आक्रमणमा ८ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो । दोहोरो भिडन्तमा ५ जना आतङ्कीको पनि मृत्यु भएको छ ।
सन् २०१८ को फेब्रुअरीमा सरकारी सेनाले उत्तरी सिनाईलाई केन्द्रित गरी भिषण सैन्य कारबाही थालेको थियो । यस क्रममा कम्तीमा ७०० लडाकूको ज्यान गइसकेको छ ।
त्यस्तै भारत प्रशासित कश्मीरमा भएको झडपमा दुई पूर्व सैनिकसहित ४ लडाकु मारिएका छन् । कश्मीरको पुलावामामा सुरक्षाकर्मीले गरेको कारबाहीपछि भएको झडपमा ४ लडाकु मारिएका हुन् ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमले ज्यान गुमाउनेमा २ जना अर्धसैनिक बलका पूर्व सुरक्षाकर्मी समेत रहेको जनाएका छन् । उनीहरु केही समयअघि भागेर स्थानीय लडाकु समूहमा भर्ना हुन गएको बताइएको छ ।
इदका दिन विदापछि दुई सुरक्षाकर्मीले हाजिर नगरेपछि उनीहरु हातहतियारसहित भागेर लडाकु समूहमा भर्ना हुन गएको आशंका गरिएको थियो ।
गत फेब्रुअरी महिनामा ५० भन्दा धेरै भारतीय अर्धसैनिकको ज्यान जानेगरी कश्मीरमा भएको बम आक्रमणपछि कश्मीरमा सेनाको कारवाही चर्किँदै गइरहेको छ ।
मारिनेहरु पाकिस्तानमा रहेर कश्मीरमा आक्रमण गर्दै आएको अतिवादी इस्लामिक समूह जैश ए मोहम्मदका लडाकु रहेको जनाइएको छ ।
उता दुबईमा बस दुर्घटना हुँदा १७ जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य पाँच जना घाइते भएका छन् । दुबई प्रहरीका अनुसार इदको छुट्टि मनाएर फर्किरहेका ३२ मानिस सवार बस दुर्घटनामा परेको हो । उनीहरु फरक फरक देशको रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
खलीज टाइम्सका अनुसार मृतक र घाइते सबैलाई राशिद अस्पतालमा लगिएको छ । प्रहरीका अनुसार एक बोर्डमा ठोक्किदा बस दुर्घटनामा परेको हो ।
मृतकमध्ये ८ जना भारतीय नागरिक रहेको दुबइमा रहेको भारतीय दूतावासले जनाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । दुर्घटना स्थानीय समय अनुसार विहीवार साँझ ५ बजे भएको थियो ।